Googarad - Wikipedia
Googarad waa shay ka mid ah dharka dumarku xidhaan kaasi oo dabacsan oo ka samaysan dun, ama cudbi, ama harag kaasi oo la tolay. Googaradu waay ka mid tahay dharka dadka kaasi oo inta badan loo xidho si jidhka uga difaaco dhaxanta. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta.
Googaradu waxay ka mid yahay dharka joogtada ah ee xidhaan dumarka Soomaaliyeed isla markaana isticmaalaan kaasi oo loo xidho in jidhka ka difaaco dhaxanta iyo qaboowga. Sidoo kale, googarada waxaa loo xidhaa xarago iyo isqurxin. Guud ahaan, googaradu waa maro la tolay taasi oo leh qaab le'eg qofka xidhanaya ama isticmaalaya sheygaasi. Googaradu wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo ka duwan noocyada kale ee dharka. Astaamaha ugu muhiimsan ee shaadhasha waxaa ka mid ah jileec, fudeyd iyo gaabni le'eg kuraanta dusheeda.
Ereyga Googarad asal ahaan lama yaqaano meel uu ka soo jeedo laakiin ilo ayaa ku tilmaamey ineey tahay Af-Hindi.
↑ Googarada xidhaan dumarka Soomaaliyeed maxay tahay?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Googarad&oldid=170129"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Luuliyo 2017, marka ee eheed 18:44.